Blockchain Izindaba 02.06.2018 - Blockchain Izindaba
Blockchain Izindaba 02.06.2018
Visa kokulungisa eYurophu Highlights ezingabangela Cryptocurrency Izinkokhelo
ubuchwepheshe Inkokhelo uye walungiselela abasebenzisi emhlabeni wonke nge ezingeni lelisetulu lula. Uma lobu buchwepheshe akusebenzi njengoba ikhangiswe, ngalesi simo kuyoba yinkinga kakhulu. Visa wahlupheka wawuhamba ezinkulu kulo lonke elaseYurophu ngenxa iningi usuku ngoLwesihlanu. Lokhu kugcizelela isidingo izixazululo ehlukile, kuhlanganise imali ngisho cryptocurrency.
Ukuhluleka visa eYurophu
Abathengi namabhizinisi kulo lonke elaseYurophu yaba nobunzima ezinkulu ukukhokhelwa ngoLwesihlanu. Kungenzeka ukuthi ubani lizama ukwenza ukuthengiselana ngokusebenzisa ikhadi lokukhokha Visa ayenezinkinga. Ukuthengiselana ayemancane noma kungenzeki nhlobo ukuze uqedele. Izikhungo zemali ngisho yeluleke abathengi ukusebenzisa ukheshi noma ezinye izindlela zokukhokha. Mastercard awuzange kule nkinga.
Visa uye ngokushesha waveza ukuthi nakuyi-Internet abaye bahlupheka ngaphansi kulokhu. Point-ka-ukudayiswa ukuthengiselana wahlala “hit and miss” ngoba ingxenye enkulu yosuku. Ukusetshenziswa ikhadi yokuxhumana zokukhokhelwa ezincane kwaba nokwenzeka ezimweni eziningi. Konke lokhu kubonisa ukuthi sengozini uhlelo lwezimali kuyinto yezinkinga zemisebenzi.
Imicimbi efana nalena bavame ukubanga nemiphumela esingalindelekile. ATM abahlukahlukene e-UK wayesebenzise up imali yabo izinqolobane ntambama. Nakuba inkinga yaxazululwa, isitatimende esemthethweni ayikazeki. I lula amakhadi okukhokha sisebenza kuphela uma ingqalasizinda eziyinkimbinkimbi okuyisa kulezi izinkokhelo lusebenza kahle. Ukuze Visa, ukuthi wayengeyona kunjalo izolo.
Isidingo cryptocurrency futhi imali
abathengi abaningi kusadingeka imali etholakalayo ukusingatha izimo ezinje. Nakuba ukwehluleka enjalo ezingajwayelekile kakhulu, zingenzeka kunini. Ngakho Cishe kwakungenakwenzeka ukuthi imali ukusetshenziswa eliyophinde encishisiwe ngokuphelele. Ukwahlulela kusukela kule kwezigigaba zokugcina, ukuthi lokho okusemandleni.
Ngaphezu kwalokho, le Visa udaba ebonisa ukuthi izindlela ehlukile yokukhokha nazo kudingeka. Ngokungafani amakhadi ukuholelwa bese kuba njalo imali, cryptocurrencies ungagcina usuku ezikhathini ezifana nalezi. Naphezu kwalesi simo esishubile zabo, izilimi eziningi zokukhokha ezikhona ukusingatha cryptocurrency ukuthengiselana kungakhathaliseki yesikhashana intengo iyehla iyenyuka.
Abathengi namabhizinisi kudingeka ukuba banake lokhu okwehlukile. Yindlela omuhle ukugcina benamanzi imali esesandleni, kodwa usadinga ikhadi ofanele inkokhelo bahoxe i-ATM. Cryptocurrencies kukhona inketho, nakuba namuhla benza zamukelwa kuphela abathengisi ezimbalwa. Izinkinga ezinjalo angashintsha ngokushesha kunokuba kamuva.
Kraken Daily Market Umbiko 02.06.2018
$131M adayiswa kuwo wonke ezimakethe namuhla
Huobi mfihlo exchange ihlele Brazil ukunwetshwa
Huobi, enkulu cryptocurrency exchange odabuka China, seliya ngomutsha shop eBrazil.
Ummeleli ovela Huobi Iqembu uqinisekisile ngenhloso yenkampani bakwazi ukungena kwimakethe yokuphehla Brazilian.
Umzamo kumaka esinye isinyathelo kusezinhlelweni Huobi sika lokwandisa global.
I izenzakalo ezibaluleke kakhulu 2017 ku Crypto Community
Bitcoin sika abukhali ...
Kanjani le ndaba yokuvinjelwa ukukhangisa mfihlo Facebook kuzosiza umkhakha
Ban ku isikhangiso mfihlo ...
Coinbase izinhlelo ukuvula ihhovisi elisha e-Chicago
Coinbase has ukuthuthukisa ...
Thumela Previous:Blockchain Izindaba 01.06.2018
Thumela Landelayo:Ethereum Wallet ImToken has $ 35B ezifakwa, Ngaphezu kwe 99% US amabhange
Blockchain Izindaba 14.08.2018
Blockchain Izindaba 13.08.2018
Blockchain Izindaba 10.08.2018
Blockchain Izindaba 09.08.2018
Blockchain Izindaba 08.08.2018
Blockchain Izindaba 07.08.2018
Blockchain Izindaba 06.08.2018
Blockchain Izindaba 03.08.2018
Blockchain Izindaba 02.08.2018
Blockchain Izindaba 01.08.2018
Blockchain Izindaba 31.07.2018
Blockchain Izindaba 30.07.2018
Blockchain Izindaba 27.07.2018
Blockchain Izindaba 26.07.2018
Blockchain Izindaba 25.07.2018
History of the cryptocurrency lokuqala
Incwadi ka the Bitcoin umsebenzi: Endlalekile Electronic Monetary System yi